VaJoe Biden Voenderera Mberi Vachidoma Makurokota Avo
ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋ Tennessee។
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Doctor Moses Rumano, vanoti vari kufara zvikuru nemakurokota adomwa naVa Joe Biden kuti vange vachishanda navo gore rino uya.
Doctor Rumano vanoti havawoni mutungamiri we America, VaDonald Trump, vachiramba kutambira zvakabva kuElectoral College iyo yakadoma mnemuvhuro kuti vajoe biden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Doctor Rumano vanoti kunyange hazvo VaTrump pari zvino vari kuramba vakatsika madziro kuti sarudzo dzakabirwa, vanowona hurongwa hwekutambidzana masimba huchienderera mberi zviri pamutemo sezvakataurwa nemukuru we Republican party mudare re Senate, Va Mitch Mcconnell.
"Pari zvino VaTrump vavakungo tanda nyadzi asi vanoziva kuti vakakundwa uye vanofanirwa kunge vave kugadzirira kuti vatambidze masimba kuna VaJoe Biden pasina mvongamupopoto sezvo Electoral College yakazivisa kuti VaBiden ndivo vaka kunda." Doctor Rumano vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio7.
Vanhu Vatatu ofa neKuda kweMafashamu eMvura kuManicaland